Sida oo boerenkool sida milkiile-meher kasta uu leeyahay goolal gaar ah, Website-yada WordPress waxay leeyihiin qaabab aan dhammeystirneyn oo suurtogal ah. Iyo sida gebruiker gebruiker ah, ujeedada ugu muhiimsan waa in la aqoonsado isku dheelitirka ugu wanaagsan ee plug-ins, inhoud, iyo qaababka qaabeynta voor waayo-aragnimo dhab ah gebruiker ah.
1.1 Doorashada sjabloon
2 Habka # 2: Abuuritaanka Galxannada aan lahayn-plug-ins
3 Habka # 3: Qalabka kale ee Plugin
3.1 Bandhigga Bandhigga ee Enorme IT
FooGallery waa mid ka mid ah plugins ugu caansan ee aad isticmaali kartid si aad u sameyso goobaha sawirada ku yaal. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto qurux badan, jawaabo mobile ah, iyo qolal dib-u-riix ah oo aan ku qorin xariiq halbeeg ah.
Habka ugu dhakhsaha badan ee lagu rakibo FooGallery waa mashiinka WordPress. Plug-ins taggen> Ku dar Ku cusub, ku qor "FooGallery", oo riix badhanka rakibida.
Ka dib markii la rakibo iyo firfircooni, waxaad bilaabi kartaa sameynta galabta koowaad adiga oo gujinaya FooGallery> Galerij toevoegen.
Geli cinwaan kaa caawin doona inaad ogaatid waxa sawirku yahay wax walba. Tani ma muuqan doonto dadka isticmaala, sidaas darteed waxaad xor u tahay inaad isticmaasho cinwaanka aad rabto.
Si aad ugu darto sawirada galabtaada, riix "Voeg media toe" hoosteeda "Alaabta Galmada".
Tani waa inay keentaa interface la yaqaan oo aad ka dooran kartaa sawir maktabaddaada warbaahintaada ah, ama waxaad ku soo diri kartaa mid cusub adigoo gujinaya Dukumiintiyada Faylka.
Marka aad buuxisay dhammaan sawirada aad u baahan tahay, horay u sii soco oo hagaajinta goobaha markaad aragto taam. Ku bilow inaad doorato sjabloon voor galerie aad.
Sjabloon ayaa si weyn u qeexaysa sida galabtaada u muuqato.
Dhanka boerenkool, sjabloon Afbeelding Muuqaalka bandhigayaa hal afbeelding marka la siiyo dadka isticmaala badhanka navigatie:
Iska fiirso in inta kale ee goobaha la heli karo ay ku xiran yihiin sjabloon. Qaar ka mid ah goobaha aad ka heli karto waa isku-xidhka galbeedka, cabbirka thumbnail, saameynta jajabka, kala-wareegidda shabakada, kumbuyuutarka, iyo wixii la mid ah.
Xor ayaad u diyaarsan tahay inaad la ciyaarto goobahaas ilaa aad ka gaarto muuqaalka aad rabto. Istaraatijiyad fiican ayaa ah in albaabbadu u furan yihiin hal tab iyo mid kale oo bog ah.
Si aad u hesho khadka gaaban ee loogu talagalay galaan gaar ah, tag FooGallery> Sawirada laga bilaabo dashboard. Guji shaxda gaaban si aad si toos ah ugu daabacdo koontadaada.
Kala bedelka boerenkool waa in lagu dhejiyo galbiyada si toos ah boosto ama moeras. Laga soo bilaabo dashboard WordPress, fur bogga ama boostada aad rabto in aad isticmaasho oo guji Knop Toevoegen FooGallery ee tafaftiraha.
Tani waxay keeni doontaa "Dooro Galbeed" meesha aad ka heli karto dhammaan galbadaha aad heli kartid. Waxa boerenkool oo aad abuuri kartaa galmo cusub oo laga soo xoqo halkan.
Si aad udheesho galabta, guji sawirka thumbnail kadibna riix badhanka galinta Galmada.
Haddii aadan ka heli karin galerij aad rabto in aad isticmaasho, waxaa laga yaabaa inaad ka abuuray oo kaliya ka mid ah tab ah. Kiiskee, kaliya riix batoonka Herlaad dib si aad u cusbooneysiiso daaqada.
Ballaarinta waa mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu weyn ee FooGallery. Markaad tagto FooGallery> Instellingen, waxaad bedeli kartaa dhowr qaybood oo ku saabsan sida loo isticmaalo plugin.
Ugu dambeyntii, FooGallery waxay taageertaa tiro fara badan oo khafiif ah oo khafiifiya oo ku daraya shaqeyn. Waxaad xiri kartaa dukaanka kordhinta adoo tagaya FooGallery> Extensies.
Habka # 2: Abuuritaanka Galxannada aan lahayn-plug-ins
Si aad u sameysid galabyada aan boostada lahayn adigoon raacin, waxaad gashaa tifaftiraha erayga WordPress kadibna riix Media toevoegen.
Ka bilow, dooro "Maak galerij" oo dooro sawirrada aad rabto inaad isticmaasho.
Marka aad leedahay dhamaan sawirada la doortay, guji Maak een knop badhanka cusub.
Ha iloobin inaad qorto talaabo ku habboon sawir kasta si ay u siiso dadka waxoogaa macno ah. Waxa boerenkool oo aad wax ka beddeli kartaa dabeecadaha isku-xirnaanta sawir kasta.
Tan u dhig "Geen" haddii aadan rabin in galabtaada ay noqoto mid dhexdhexaadineysa.
Habka # 3: Qalabka kale ee Plugin
Waxaan hadda ku soo aragnay laba ka mid ah doorashooyinka ugu caansan ee lagu daro galinka dambe ee boosteejooyinka posts ee WordPress.
Si aad u hesho raaxo dheeraad ah, halkan waxaa ah dhowr habab boerenkool oo loogu talagalay FooGallery waxaad ka fiirsan kartaa:
Bandhigga Bandhigga ee Enorme IT
Site: www.imagely.com/nextgen-gallery/; Qiime: Bilaash / $ 69
Marka la eego qalabyada firfircoon, NextGEN Galbeedku waa kan ugu sarreeya ee ka sarreeya isticmaalayaasha 1 miljoen. Sababta kaliya ee sababta FooGallery loogu diyaariyay booskan waa qiimaha sarreeya. Waxa kale oo ay leedahay qaybo dheeraad ah oo lagu sharxi karo kuwaas oo noqon kara wax yar oo ku wareeraya dadka cusub. Si kastaba ha ahaatee, waa plugin adag oo kaa caawin karta inaad abuurto qurxiyo qurux badan iyo jawaabo.
Dhisidda bogga quruxda badan ee WordPress ma aha sayniska raajada. Sida oo kale sida
Dhisidda bogga quruxda badan ee 워드 프레스 ma aha sayniska raajada. Sida oo kale
Dhisidda bogga quruxda badan ee WordPress mahaha sayniska raajada. Você também pode encontrar o
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad u badan oo ku saabsan WordPress. Caminho fududahay